आज २०७७ साउन ५ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- – Online Sunapati
घरमा दुख छिर्न नदिन ध्यान दिनुहोस् ८ कुरामा, सधैँ हुन्छ सुख र समृद्धि
कोरोनाको खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मीमा सामन्य समस्या
एक सुको खर्च नगरी कतारको लागी कामदारको माग।तलब ८० हजार।आजै यसरी आवेदन दिनुहोस
मुख्य पृष्ठ /News/आज २०७७ साउन ५ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
आज २०७७ साउन ५ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
राजेश हमालका भाइ राकेश रहेनन्
पशुपतिनाथलाई चिसोबाट जोगाउन धनुर्मास पूजा गरिने
१५ किलो सुन प्रकरण : इल्ताफ हुसेन अन्सारी बाराबाट पक्राउ परे